अवसर खोज्दै प्रहरीमा दौडधुप: कसले गर्ला ललितपुर कमाण्ड ? | Citizen Post News
अवसर खोज्दै प्रहरीमा दौडधुप: कसले गर्ला ललितपुर कमाण्ड ?
२०७६ साउन २८ गते १०:०४
ललितपुर । महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरको प्रमूख बन्ने दौडमा आधा दर्जन प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक (एसएसपी) रहेका छन् । एसएसपी रवीन्द्र धानुकको एक बर्ष सकिएर रिक्त हुन लागेको ठाउँमा जान ६ जना एसएसपीको दौड सुरु भएको हो । काठमाडौं परिसरपछि ललितपुरलाई मुख्य केन्द्रका रुपमा हेरिने गरिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसै साता आधा दर्जन एसएसपीको सरुवाको तयारी गरेको छ । जसको सिफारिस गृह मन्त्रालयमा लगिँदैछ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट एसएसपीको सरुवा गरिनेछ । सुरक्षालगायतका दृष्टिकोणका हिसाबले प्रहरी महानिरिक्षक (आइजी) सर्वेन्द्र खनालले इच्छाएको व्यक्ति नै ललितपुरका प्रमूख बन्न सक्नेछन् । यद्यपि, उक्त ठाउँमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राईलगायतको पहुँच लगाउनेको पनि कमी छैन । आइजीपी खनाल ललितपुर प्रहरीको नेतृत्व एसएसपी उमेशराज जोशी चहान्छन् । यसबाहेक विविध केन्द्रका आफ्ना स्वार्थका आधारमा पनि प्रहरीमाथि सिफारिसको दबाब रहेको उच्च स्रोतले जानकारी दियो ।
गृहसचिव प्रेमकुमार राई, गृहमन्त्रीसँग पनि लविङ गराउने कम छैनन् । गृहसचिव राईले एसएसपी टेकप्रसाद राइलाई ललितपुर पठाउने तयारीमा रहेका छन् । तर राईलाई उक्त कमाण्ड दिने कि नदिने भन्ने विषयमा प्रहरी प्रमूख खनालसँग परामर्श हुनेछ । बिमानस्थल सुरक्षा कार्यालयमा काम गरी विदा बसेका एसएसपी सन्दीप भण्डारी, महानगरीय प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत एसएसपी किरण बज्राचार्य र श्यामलाल ज्ञवाली पनि ललितपुर जान बल गरिरहेका छन् ।
यी सबै अब्बल अधिकारी नै मानिन्छन् । एसएसपी शरद खत्रीले अवकाश पाएपछी संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धरान अहिले नेतृत्वबिहिन छ । त्यस्तै संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय लुम्बिनी, तालीम केन्द्र दुधौली, बुटवल, नेपालगन्ज र दिपायल लगायतका स्थानको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछन् । महानगरीय ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख एसएसपी बसन्तकुमार पन्तको कार्यकाल पूरा भइसकेकोले पन्तको ठाउँ पनि खाली छ । ‘यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन । यो दौडमा को कसरी कहाँ पुग्छ हेर्नुपर्छ’, प्रहरी स्रोतले भन्यो ।
प्रहरी मुख्यालयले एसपी र डिएसपीहरूको पनि सरुवाको तयारी थालेको छ । रुपन्देहीको प्रमुख हुन केही एसपीहरूको दौडधुप शुरु भएको छ । गत बर्ष अख्तियारबाट रुपन्देही गएका एसपी हृदय थापाको एकबर्षे कार्यकाल पूरा भइसकेको छ । रुपन्देही जान एसपीहरू नवराज अधिकारी, विश्वमणी पोखरेल, कमल थापाको चर्को लबिङ छ । डिएसपी प्रमुख रहने उपत्यकाको महाराजगन्ज, कालिमाटी र बालाजु वृत्तको पनि नेतृत्व परिवर्तन हुँदैछ ।
‘सागको सम्पूर्ण खर्च विवरण ९० दिनअघि नै सार्वजनिक गर्छु’
२०७६ मंसिर २६ गते १८:४१
तस्करीमा परेका बालबालिकालाई ‘जीन्दगीको उडान’ सर्कस देखाइने
२०७६ मंसिर २६ गते १८:२०
काँग्रेसका नेताद्धयले आफूभन्दा सिनियरलाई 'तिमी' भनेपछि..
२०७६ मंसिर २६ गते १५:४६
नागरिकता विधेयकको विरोधमा असममा प्रदर्शन, २० जना घाइते
२०७६ मंसिर २६ गते १५:३३
आफ्नैले छाडेपछि नेपाली कांग्रेसको साथ खोज्दै 'प्रचण्ड'
२०७६ मंसिर २६ गते ०९:३४
टेण्डरमा करोडौंको सेटिङ, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ’
२०७६ मंसिर २६ गते ०९:२३
निशानामा नेपाली बैंक, ह्याकर अघिअघि, पछिपछि प्रहरी
२०७६ मंसिर २६ गते ०९:१३
घुस काण्डले अपराध महाशाखामा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक नै समातिए
२०७६ मंसिर २५ गते २१:५७
पप्पुले काम नगरेपछि एकैपल्ट दुई वटा पुलको ठेक्का तोडियो
२०७६ मंसिर २५ गते २१:२३
'अभागी राष्ट्र नेपाल जसलाई अपर ...
२०७६ कार्त्तिक ५ गते १४:३४
'चीनले नेपाल सरकारलाई राम्रोसँ ...
२०७६ कार्त्तिक १ गते ०९:४९
जानौंः बास्तबिक सौन्दर्य के हो ...
२०७६ मंसिर १ गते ११:२४
जानौं: तुलसी को थिइन ? ...
२०७६ कार्त्तिक २५ गते १५:०७
'भारत विरुद्ध सरकारले अन्तर्रा ...